ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အန္တရာယ် ကင်းဝေးဖို့ . . . – Good Health Journal
ယာဉ်မောင်းနေစဉ် အန္တရာယ် ကင်းဝေးဖို့ . . .
တချို့ယဉ်မောင်းတွေက ကားကိုတရကြမ်းမောင်း တာ၊ တချို့ကအချက်မပြဘဲ ရုတ်တရက်ကောက်ကွေ့ တာ၊ တချို့က မိုင်ကုန်မောင်းတာ၊ တချို့ကနှေးနှေးလေး မောင်းတာ၊ တချို့က ကားမောင်းနေရင်း ဖုန်းပြောတာ၊ စာရိုက်တာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာ၊ အစာစားနေတာ စသဖြင့် ယဉ်မောင်းသူ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အန္တရာယ်ဆိုတာအချိန်မရွေး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်က ယဉ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးအောင်၊ လျော့ ကျအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကားမောင်းတယ်ဆိုတာက ဦးနှောက်ကို အသုံးပြု ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့အခါ ဦး နှောက်ကိုအလုပ်ပေးရမယ့်အချက်တွေက-လမ်းအခြေ အနေကို အကဲခတ်ပါ၊ သင်ရဲ့ယဉ်ဦးတည်ရာလမ်းနဲ့ ယဉ်အမြန်နှုန်းကို ချင့်ချိန်ပါ၊ မီးပွိုင့်တွေ၊ အမှတ်အသား တွေ၊ သင်္ကေတတွေကို ကြည့်ပါ၊ သင့်ကားအနီးနားရှိ ကားတွေကိုသတိပြုပါ၊ နောက်ကြည့်မှန်၊ ဘေးဘက်မှန် တွေကနေ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။
ကားမောင်းနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းဖို့ အဓိကက စိတ်အာရုံမပျံ့လွင့်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းနေစဉ် ကားမောင်းတာတစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံရှိနေဖို့ အရေး ကြီးပါတယ်။ သင်ဟာ ယဉ်မောင်းသက်တမ်းဘယ်လောက် ကြာကြာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့မပေါ့ဆပါနဲ့။ ကားမောင်းနေစဉ် တခြားအာရုံရောက်စေမယ့်အရာတွေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
မူးနေရင် ယဉ်မမောင်းသင့်သလို အိပ်ချင်နေရင် လည်း ယဉ်မမောင်းသင့်ပါဘူး။ သင့်ကားအနီးအနားတစ် ဝိုက်ရှိယဉ်တွေကိုလည်းအကဲခတ်ပါ။ တရကြမ်း မောင်း နေတဲ့ယဉ်ရှိရင် သင့်ကားကို အရှိန်လျှော့ထားပါ။ လမ်း ကြောပေါ်က လမ်းသွားလမ်းလာတွေ၊ စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း သတိထားပါ။
ယဉ်တိုက်မှုအများစုက အရှိန်မထိန်းနိုင်လို့ ဖြစ်ရ တာချည်းပါပဲ။ ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ပဲ အမြန် မောင်းမောင်း သင့်အနေနဲ့ သင်သွားတဲ့ လမ်းကြောင်း အခြေအနေ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုပါ ထည့်စဉ်း စားပြီး အရှိန်ကိုလျှော့ပြီး မောင်းတာ အန္တရာယ်အကင်း ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Categories:	Article	/ by Good Health Journal September 9, 2019